सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै आक्रामक भएपछि बिक्न छोड्यो सुन - Everest Dainik - News from Nepal
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै आक्रामक भएपछि बिक्न छोड्यो सुन
काठमाडौं, साउन २१ । नेपाली नारीहरुको महान् चाड तिजको मुखैमा बजारमा सुनचाँदीको भाउ आक्रामक बन्दै गएको छ । आक्रामक भाउका कारण सुनचाँदीको बिक्री भने मन्द हुँदै गएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो केही दिनयता सुनको भाउले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ६७ हजार ८ सय र तेजावी सुन ६७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १५ सय रुपैयाँले बढेको हो । सोमबार चाँदी प्रतितोला ७ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस मंसिर नजिकिएसँगै सुनको मूल्य बढ्यो
अमेरिका र चीनबीचको पछिल्लो समय चलिरहेको व्यापारिक तनावका कारण सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको सुनचाँदी व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय अमेरिका र चीन तथा इरान र अमेरिकालगायत भारतमा पनि तनाव छाइरहेकाले सुनचाँदीको भाउ महङ्गिएको सुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा दैनिकमा छापिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
ट्याग्स: अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य, सुन
को हुन् नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने ११औं व्यक्ति ?
नेपालमा बनाइएको कोरोनाविरुद्धको खोपमा डब्ल्युएचओको चासो
जुम्लामा पनि क्वारेन्टाइनमै १ जनाको मृत्यु
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन २०३१ सालमै भएको थियो दरबारबाट प्रयास
जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण योगदानः प्रधानमन्त्री ओली
भारतमा कोरोना कहर: फेरि बन्यो नयाँ रेकर्ड !
रुकुम घटनाः थप सात जना पक्राउ
खुकुलो पारिँदै लकडाउन, कस्ताे बन्याे विस्तृत योजना ?
कोरोनाबाट नेपालमा थप १ जनाको मृत्यु